February 2016 - Ibsaa Jireenyaa
Qulqullinna Qalbii-Kutaa 2ffaa
February 27, 2016 Sammubani One comment
Yeroo darban keessa dhibeewwan qalbii tuttuuquf yaalle turre. Muraasa isaani maqaa dhoofne turre. Qalbiin yeroo hundaa karaa adda addaatin dhukkubsatti. Garuu qaamni yeroo hundaa kan dhibamu osoo hin ta’in yeroo muraasa. Namni dhibee qalbiitin du’ee dhumni/ga’uumsi isaa nama sodaachisa akkuma kutaa 1ffaa keessatti jenne. Namni dhibee qaamatin du’ee yoo qalbiin isaa qulqulluu taate malkaa’inna ol’aanaa galmaan gaha. Aalimoonni tokko tokko akkana jedhu,”Dhibeen qalbii azaaba(adabbii) Rabbiiti, dhibeen qaamaa immoo rahmata Rabbiiti.” Sababni isaas dhibeen qaama cubbuu namarraa haaqa, dhibeen qalbii immoo cubbuu/badii namatti dabala. Qalbiin namticha yoo dhibamte namtichi cubbuu irratti cubbuu biraa hojjata. Kanaafu qalbii teenya qulqulleessuf carraaqun bu’uura milkaa’inna fi gammachuu jiruu fi jireenya keenyati. Read more
Qulqullinna Qalbii-Kutaa 1ffaa
February 20, 2016 Sammubani Leave a comment
Qalbii ofii qulqulleessun maaliif barbaachise? Dhukkubni dhukkaba caalu dhukkuba qalbii akka ta’ee sirritti hubanne jirraa sila? Baay’een keenya qalbii teenya irraanfanne jirra. Xurii adda addaa irraa ishii qulqulleessu dhiisne addunyaa qofa jala fiigaa jirra. Galaana duniyaa tana jala lixne jirra. Gaafi qalbii ofii qulqulleessun maaliif barbaachise kan jedhutti yoo deebi’u, qalbii ofii qulqulleessun furtuu milkaa’innaati,tuqaa ka’uumsa jijjiramaati. Namni xurii akka munifiqummaa, of tuuluu, jibbaa, waanyoo, fi kkf irraa of qulqlulleessuf carraaqu dhugumatti ni milkaa’a. Read more
Gaa’ila Duraa Gufuu kaasu lakk. 4
February 13, 2016 Sammubani 2 comments
Gaa’ila duraa gufuu kaasu mata duree jedhu jalatti wantoota baay’ee waliin mari’achuun keenya ni yaadatama. Wantoota baay’ee akka baranne abdiin qaba. Warroonni fuutanii fi hin fuune qophiile kana dubbisuun jireenya keessan foyyeefachuuf akka carraaqa jirtan abdiin qaba. Hanga ammaa mata duree “gaa’ila duraa gufuu kaasu” jedhu jalatti seeronni mari’ataa turre kitaaba “20 Rules and Tools for a Great Marriage” jedhamurree fudhatamaniidha. Wantoonni kitaaba kanarraa fuudhannu haala armaan gadiitin xumuramu. Read more
Gola Seenaa Irraa Lakk.3
February 6, 2016 Sammubani 2 comments
1.Dogongora ofii yommuu amantuu
Dubartiin takka seenaa ofii akkanatti ibsiti
Seenan kiyya ifaadha. Dogongora kiyya irraa akka barattaniif isinitti hima. Gaa’illi koo gamtoominna anaa fi abbaa mana jidduu kiyyaatin haala gammachuutin jalqabame. Dureessa hin turre, garuu wanta qabnutti kan gammannu turre. Intala garmalee jaalannu takka qabnaa turre. Marsaa jalqabaa gaa’ila keenya intala teenya raffisnee, salaatu,Rabbiin faarsu fi Qur’aana qara’aa turre. Read more
Kuusaa Select Month December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 July 2015
Qiyaamaa Mormitootaaf Deebii Kenname-3
Qiyaamaa Mormitotaaf deebii kenname-2
Qiyaamaa mormitotaaf deebii Kenname-1
Aakhiratti amanuu-kutaa 3ffaa
Aakhiratti amanuu-kutaa 2ffaa
Tafsiira Juuza Sadani (60MB)